पिपलको पातको सेवन गर्नाले धेरै फाईदा। | Dainik Sanjal
Home स्वास्थ्य पिपलको पातको सेवन गर्नाले धेरै फाईदा।
पिपलको पातको सेवन गर्नाले धेरै फाईदा।
हृदयघातबाट बच्ने घरेलु उपाय :
हाम्रो घर वरपर कतिपय प्राकृतिक बनस्पति उम्रिरहेका हुन्छन, तर चिन्न न सकेर व्यर्थ त्यसलाई नास पार्दै जान्छौ । हाम्रै घर वरपर उम्रेका बनस्पतिमाहरुमा मनिषलाई मृत्यु सम्म डोर्याउने अनगिन्ति रोगहरुलाई रोकथाम तथा पूर्ण रुपमा निर्मूलन गर्ने क्षमता हुन्छ । हामीले बुझ्न मात्र नसक्या हो नत्र भने हरेक रोग हामी आफैले निको पर्न सक्छौ ।
यस्तै रोग निर्मूलन गर्ने क्षमता भएको एउटा वोट हो पीपल, जसलाई हामी धार्मिक मान्यता दिएर पूजा-अर्चना गर्छौ । पिपलको जरा, बोक्रा र पातको अनगन्ती फाइदाहरु छन् जसमध्ये आज हामी यहाँहरुको माझमा “पिपलको पात” को बिशेस्ता बारे जानकारी गराउन चहान्छौ ।
पीपलको १५ वटा हरियो तथा हेर्दा राम्रो पात लिनुहोस्, कोपिला पात चाई प्रयोग नगर्नुहोस । प्रत्येक पातको माथिको र तलको केहि भाग कट्नुहोस ।
पातको बिचको भाग मज्जाले सफा पानीमा पखाल्नुहोस । एक गलास पानी एउटा भाडोमा राखेर पखालिएको पातलाई त्यसमा हाल्नुहोस र कम तापक्रम (आगो) मा पाक्न दिनुहोस । जब पानी उम्लिएर एक तिहाई हुन्छ, भाडोलाई आगो माथिबाट निकालेर पानी सेलाउन दिनुहोस र सफा कपडामा छानेर चिसो ठाउमा राख्नुहोस । त्यति गरेपछि तपाईको औषधी त्यार हुन्छ ।
त्यार भएको उक्त औषधीलाई तीन खुराक बनाएर प्रत्येक तीन – तीन घण्टामा सेवन गर्नुहोस । हृदयघात (हार्ट अटैक)को केहि समय पश्चात लगातार पन्द्रह दिन सम्म यसलाई दैनिक सेवन गरेमा हृदय पुन: स्वस्थ बन्छ र हृदयघातको सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ ।
यदि तपाई मध्ये कोहि हृदयघात (हार्ट अटैक)को बिरामी हुनुहुन्छ भने यो उपचार पद्धती अवस्य अपनाउनुहोस् ।
पीपलको पात नै किन ?
* पीपलको पातमा हृदयलाई बल र शक्ति दिने अद्भुत अर्थात् अचम्मको क्षमता हुन्छ ।
* यस पिपलको पातबाट बनाएको औषधिलाई बिहान ८ बजे, ११ बजे र २ समय बिलाएर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ ।
* औषधि सेवन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा : खाली पेट औषधि सेवन न गर्नुहोस, नास्ता गरेर मात्र यो औषधि सेवन गर्नुहोस ।
* सेवन अबधि सम्म तेल भएको खानेकुरा र चामल प्रयोग गर्नु हुदैन। माछा, माशु, अण्डा, नुन, चिल्लो पदार्थ, मदिरा र धुम्रपानको प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।
* अनार, मेवा, आंवला, बथुआ साग (प्राय: नेपालको तराई भेगमा पाईन्छ), लहसुन, मेथी दाना, मौसंबी, मासको दाल , किशमिश, गुग्गुल, दही इत्यादीको प्रयोग गर्नुहोस ।
पिपलको पात हृदय आकारको हुन्छ ।
ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु: यो पद्धतिको कुनै साइड इफेक्ट छैन । कुनै गम्भीर रोग भएमा, यो पद्धति अपनाउनु अघि आफ्नो चिकित्सक संग अबस्य परामर्श लिनु होला
दाइ नभएको मौकामा देवरले भाउजु बिताए…पढ्नुहोस् पूरा कथा 12 views
सिमिकोट एयरपोर्टमा मकालु एयर जहाज दुर्घटना5views
लागेको पत्तै नपाउने रोग थाइराइड, यसरी जोगिनुस्…5views
कथा : पुनमाया भाउजु र भाउजुको आठ तल्ले घर4views
धर्म शास्त्र अनुसार स्त्रीले कहिल्यै गर्न नहुने यी काम !4views
बिमान दुर्घटनामा नुवाकोटे चेली स्वेता थापाको निधन भएको पुष्टी4views
यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४९ पुग्यो, केएमसीमा ८ जनाको निधन (भिडियो)4views
यसकारण लगाउनुहुन्न कसिलो जिन्स पाइन्ट र टिर्सट ? एक पटक सबैले पढ्नै पर्ने जानकारी !3views
यस्ता फुलहरु जसको स्वरुप नै मानिसको यौनाङग जस्तो (तस्बिर सहित)3views